Akụkọ - High voltaji mmemme ike ọkọnọ
Huyssen ike bụ onye na-eweta ụwa zuru ụwa ọnụ nke High Voltage Programmable DC Power Supplies. Anyị nwere usoro nke DC programmable ike onunu na ndị kasị adabara na kpọmkwem na ezi na-aga n'ihu DC ngwa ebe a kwụsiri ike na-achịkwa nke ọma mmepụta voltaji na ugbu a dị oké mkpa. A na-enweta akụrụngwa ndị a n'ụzọ zuru ezu site na 0.1% ruo 100% nke voltaji / nke dị ugbu a, yana oke izi ezi yana arụmọrụ siri ike.
Anyị DC ike onunu bụ dịgasị iche iche programmable ịmafe ike onunu na kpọmkwem laabu arụmọrụ. Ha na-enye mgbanwe na njikwa achọrọ maka ule & nha taa, ATE na ngwa ụlọ nyocha.
Ogwe ihu nke dijitalụ a na-achịkwa dị mfe iji ma na-enye ntọala ntuziaka ziri ezi nke mmepụta ọkụ. Ihe agbakwunyere RS232/485 dijitalụ serial interface dị na ngwugwu ọkọlọtọ, na-echekwa ohere ma na-enye ohere maka ntọala dịpụrụ adịpụ na nkwurịta okwu na ike ọ bụla.
Ọkụ eletrik anyị nwere ike ime nwere ọtụtụ ngwa dị iche iche, dị ka sistemụ ịka nká relay, sistemu ule moto, ule ịka nká capacitor, sistemu ule oriọna oriọna, sistemụ geothermal, ikuku ikuku, ngwa nnwale, ike ọhụrụ, wdg.
Anyị ewepụtala ọkụ ọkụ na-achịkwa mmemme na oke mmepụta voltaji. Mpụta voltaji ruo 20kV, na ike ịrụ ọrụ na-eju afọ.
Anyị ka na-emepụta ihe ọkụ ọkụ dị iche iche nkọwa. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhazi akụrụngwa ọkụ dị iche iche, biko kpọtụrụ anyị!
Oge nzipu: Sep-10-2021
Nnweta ike mmemme, Nweta ike ahaziri ahazi, Nnyenye ike na-agbanwe agbanwe, Na-eweta ọkụ ọkụ Led Strip, Nkwanye ike Dc, mgba ọkụ mode ike ọkọnọ,